Akụkọ - Youxing Shark （Shanghai) Science & Technology Co., Ltd.
NwaanyịFang Zhenying, onye si n’ugwu dịpụrụ adịpụ wee gaa Shanghai, bidoro ire 502 ozugbo. Nyịnya ígwè 28 na-eme njem bụ nanị obere njem nke obere nwa agbọghọ ahụ n'afọ ahụ. Ọ soro ya site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ala ịta ahịhịa nke Shanghai.
Ms.Fang Zhenying, onye na-enweghị ahụmịhe ahịa, ngwa ngwa nwetara ntụkwasị obi nke ọtụtụ ndị nwe ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ ọrụ akwa osisi siri ike na nkwụsi ike ya na ezi obi. Site na ichọ nlanarị na ịchọ mmepe, o mepere ụlọ ọrụ izizi, wee mekwaa aha 502 ozugbo bụrụ aha ụlọ na East China.
Site na otu onye na-anya otu ndị mmadụ, Fang Zhenying, onye na-azụ ahịa dị mma, kwesịrị ịme nhọrọ: ọ kwesịrị ịgbaso nzọụkwụ nke ndị ọzọ ma dozie ọnọdụ dị ugbu a? Ma ọ bụ chọọ mmepe ogologo oge? O kpebisiri ike ịhapụ nwa oge ịhapụ ahịa ahịa dị elu nke 502 ozugbo na ịgbanwee gaa nrapado gburugburu ebe obibi na gburugburu ebe obibi na nchọpụta ọhụụ na ihe ọhụrụ, mmepụta na ahịa.
Dịka ahịa nke ngwaahịa na-emetọ gburugburu ebe obibi na-aga n'ihu na-eto, ebe na akụrụngwa enweghị ike afọ ojuju mmepe nke ụlọ ọrụ. N'otu oge ahụ, Ms. Fang Zhenying na-ebu amụma na ịhazi na njikwa nke Shanghai Fine Chemical Industry ga-abụ mba ụwa n'ọdịnihu. O kpebiri ịgbanwe ka ọkọlọtọ na ogo nke ezigbo kemịkal wee banye n'ọmarịcha ụlọ ọrụ kemịkal mara mma.
Innovation na transcendence abụkarịla isi ihe mmepe Shark. Ntughari ohuru nke emeputara nkpuru na-amuta nkpuru mgbe otutu oge nke ntinye ego n'ime ihe ohuru ohuru: Youxing Shark enwetawo ihe omuma nke mba 27 nke nchebe gburugburu ebe obibi, meriri isi teknụzụ nke ngwaahịa a ma nweta ihe omuma oru!
Ọhụrụ na transcendence nke àgwà ika na-akwalite nweta nkwalite na mmepe nke ika. Youxing Shark amalitela ịbanye n'okporo ụzọ nke mbuli akara: ọnọdụ ọhụụ, onyonyo ọhụrụ, nkwakọ ngwaahịa ọhụrụ, ọwa ọhụrụ .... Th tufuo usoro ochie na iwulite isi ọhụụ. ịntanetị ịntanetị na ọwa anọghị n'ịntanetị iji mụbaa òkè ahịa.
Amalitere na 2013
Enwetara Youxing Shark dị ka ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ, sayensị na teknụzụ obere nnukwu ọrụ, District Technology Center Product Superior Enterprise. Youxing Shark nwere atụmanya siri ike maka ọdịnihu. The ụlọ ọrụ ka n'ụzọ zuru ezu tozuru etozu management na ọma depụtara na ahịa, na-aghọ a ọkọlọtọ nke ọhụrụ environmentally friendly adhesives na ọhụrụ ihe ụlọ ọrụ!
2016 na-arị elu
Mgbe afọ anọ nke integrated ahịa mgbanwe na upgrading, Youxing Shark ọma ọma guzosie atọ isi ahịa ọwa, e nwere kpọmkwem ahịa, nkesa, e-ahịa karị .Ọ emewo ihe niile na-gburugburu atọ-akụkụ ọwa Ọdịdị na realizied a itu ukwu-atụ uto na ahia
2018 na-arọ nrọ
N'ọdịnihu, anyị ga-agba mbọ iji wuo Ọkachamara magburu onwe ya nke ngwọta njikọ ọkachamara maka ịkọ ụlọ ọhụrụ maka ihe ọkụkụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na gburugburu ebe obibi na gburugburu ebe obibi na gburugburu ụlọ ọrụ ọhụrụ, nke ga-adabere na R&D ọhụrụ na ntọala ntọala na Shanghai na Zhuhai isi osisi ndepụta dị ka ihe mgbaru ọsọ anyị na-agbaso na isi omenala echiche nke "Nwee obiọma na ilekwasị anya, na ijikọta"
Nrọ n’elu igwe
NwaanyịFang Zhenying, onye si n’ugwu dịpụrụ adịpụ wee gaa Shanghai, bidoro ire 502 ozugbo.
Nwada Fang Zhenying, onye na enweghi ahia ahia, ya na ezi okwu ya ...
Ọhụrụ na transcendence nke àgwà na-akwalite nweta nkwalite na mmepe nke ika.
Onye ọ bụla bụ onyeisi
Nnukwu nrọ nke Xiao Li, onye ọkachamara n'ịzụ ahịa ahịa nke ya na Shark nọrọ afọ abụọ .......
Na ọkwa ugbua nke mmụba nke mmadụ, ma ị dị njikere ma ọ bụ na ị kwadoghị ...
Azu na-alụ ọgụ megide ọrịa ahụ ọnụ
Na 2020, okpueze oria ohuru ohuru ga ekpocha Wuhan niile site na Wuhan.